Ciidamada dowladda oo dib uga soo baxay deegaano ka tirsan Sha... | Universal Somali TV
Ciidamada dowladda oo dib uga soo baxay deegaano ka tirsan Shabellaha hoose oo Shabaab ay ka qabsadeen
Ciidamadaa Dowladda Soomaaliya ayaa dib uga baxay deegaanno ka mid ah Gobolka Shabeellaha hoose oo ay shalay kala wareegeen Al-Shabaab.
Ciidamada ayaa shalay subaxdii hore la wareegay Degmada Awdheegle iyo deegaannada Mubaarak,Farsooley,Daarusalaam iyo Ugunji,waxaana isla shalayba ay ciidamada dib uga soo baxeen kaddib qabsashadoodii.
Ciidamada Xarakada Al-shabaab ayaa dib u qabsaday degaannadaas ay banneeyeen Ciidamada dowladda iyaga oo sheegay in Ciidamadii dowladda iyo Amisom ee shalay subaxii qabsaday ay ka baxeen.
Abaanduulaha Ciidamada xoogga dalka Jen Cabdullahi Cali Caanood ayaa sheegay in Saldhig Al-shabaab ay kula haayeen Mubaarak ay ku bur buriyeen saldhig iyo gaadiid ay ka buuxaan walxaha qarxa oo uu sheegay in Muqdisho loo waday.
Ciidamada Amisom iyo saraakiisha dowladduba wali kama hadlin dib uga bixidda degaannadii ay shalay qabsadeen inkasta oo maamulka Gobolka Shabeellaha hoose uu sheegay in xeelad ciidan ay tahay dib uga gurashada degaannadaasi.
Kan-xigaDuqa Muqdisho oo degmada Boondheere k...
Kan-horeMuwaadin Somaliyed oo lagu dilay Maga...
40,691,194 unique visits